गोजीमा दाम भएका ४ जना उमेर ढल्किएका पुरुषसँग बर्षा राउतको एकसाथ रोमान्स [भिडियो] | नेपाली जनता :: Nepali Janta:
प्रकाशित मिति २० पुष २०७५, शुक्रबार २२:०० लेखक नेपाली जनता
कांग्रेस नेताबीच कुटाकुट
काठमाडौं । नेविसंघ ओखलढुंगाको अधिवेशनमा नेपाली कांग्रेस जिल्ला नेताहरुबीच कुटाकुट भएको छ । नेताहरुबीच नै हात हालाहाल भएपछि…
शहरी करिडोर निर्माण गर्ने प्रदेश १ को महत्वाकांक्षी योजना
विराटनगर । प्रदेश १ सरकारले महत्वाकांक्षी योजनाको रुपमा शहरी करिडोर निर्माणको योजना अघि सारेको छ । करिब २०२ मिलियन…
डा. गोविन्द केसीको ‘आफ्नो मान्छे’ जेपी अग्रवालको ‘धन्दा’: टिचिङका विरामी सुटुक्क दरबारमार्गमा !
काठमाडौं । शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जका प्राध्यापक डा. गोविन्द केसीले मेडिकल क्षेत्र…
काठमाडौं । नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा (प्रकाण्ड) का कारण पार्टीभित्र ठूलो विवाद…